Fifidianana filoham-pirenena : 12 ireo kandida -
AccueilRaharaham-pirenenaFifidianana filoham-pirenena : 12 ireo kandida
Herinandro tsy hikatonan’ny fanateran’ireo antontan- taratasy firotsahan-kofidiana ho filoham-pirenena eny amin’ ny HCC, miisa 12 ireo kandida efa nanatitra dosie amin’ izao fotoana izao. Andrasana hatramin’ny faha 21 ny volana Aogositra kosa, ny an’ireo kandida izay tsy mbola nahatanteraka izany.
Nanokatra ny fanaterana antonta taratasy izany ny teo anivon’ ny antoko TGV , manolotra an’i Andry Rajoelina, narahin’ i Jean Ravelonarivo avy amin’ ny Antokom-bahoaka(ABA). Raha ny omaly kosa dia kandida roa no nanatitra ny antonta taratasiny teny anivon’ ny HCC dia i Jean Omer Beriziky avy amin’ ny antoko Antsika i Madagasikara sy Richard Razafy Rakotofiringa avy amin’ ny Solidarité des Jeunes Intellectuels pour l’Avenir de Madagascar (SJIAM). Marihana fa ingahy Randriamorasata Solo Norbert avy amin’ ny Union Démocrates Chrétiens de MAdagascar (UDCMA-KMTP) no zokiny indrindra amin’ ireo kandida hatreto, izay 80 taona. Minisitra roa tamin’ ny fitondrana ankehitriny kosa no manatevin-daharana ny mpifaninana dia i Jules Etienne Rolland avy amin’ ny MAdagasikara FIvoarana (MAFI), izy izay minisitry ny indostria ny taona 2013, ary i Rabary Andrianiaina Paul avy amin’ ny Miasa izay minisitry ny fanabeazam-pirenena teo aloha. Rehefa fotoan-dehibe eto amin’ ny firenena tahaka izao, dia tsy diso anjara ny mpanankanto, ka isan ‘ny efa nanatitra ny antonta taratasy ny faha 10 ny volana Aogositra teo ihany koa i Rasolofondrasolo Zafimahaleo antsoina hoe DAMA Mahaleo avy amin’ ny Manajary Vahoaka. Ankoatran’ ny mpanakanto dia hisan ‘ny nirotsaka ho fidiana, ary nanatitra ny antonta taratasiny ihany koa ny mpitarika fivavahana dia i Mailhol André Christian Dieu Donné avy amin’ ny Gideona, Fandresena ny Fahantrana eto Madagasikara (GFFM).
Roa kosa ireo vehivavy efa tazana teo amin’ ny sehatry ny fanoherana no nirotsaka , dia i Rabearisoa Saraha avy amin’ ny Parti Liberal Démocrate (PLD) sy Ernaivo Fanirisoa avy amin’ ny ZAnak’i MAdagasikara (ZAMA) sy « PArti TRAvailliste Malagasy » (PATRAM ). Ary farany dia nirotsaka amin’ ny halalan’ ny Fahefa-Mividy no Ilain’ny Malagasy (FMI-MA) kosa i Ratsietison Jean-Jacques Jedidia. Marihana fa aorian’ ny famohan’ ny HCC ny lisitra ofisialy, ho an’ireo nahafeno ny fepetra, no hirosohan’ny CENI indray ny fanatanterahana ny hatsapaka amin’ ny filaharana anatin’ ny biletin tokana.
Ankoatra izay anisan ‘ny tena andrasana fatratra ny firotsahan-kofian ‘ny filoham-pirenena amperin’asa, noho ny asa maro sy ny fotodrafitr’asa fampandrosoana vitany. Ankoatr’izay ny fangatahin’ ny antoko misy azy, sy ireo mpanohana tahaka ny Voromahery ny hirotsahany ho fidiana. Torak’izany koa ingahy Marc Ravalomanana izay efa nanomana mafy ny firotsahany ho fidiana taorian’ny fiverenany sesin-tany.
Noho izany, tsy mbola hijanona amin’ io 12 io ny isan ‘ireo kandida, fa mbola hitombo izany amin’ ity herinandro farany ity. Hizakazaka ho eny amin’ ny HCC avokoa izany ireo manam-paniriana hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena, toa an –dry Elianne Bezaza avy amin’ ny antoko PSD, José Vianey, Roland Ratsiraka ary Orlando Robimanana. Izany hoe ankoatran’ireo kandida izay ho tonga tampoka, dia vinavinaina eo amin’ ny 18 eo ireo kandida ho filoham-pirenena amin’ ny fifidianana ny taona 2018.